WestJet waxay Taageertaa Tallaalka Qasabka ah ee Shaqaalaha Diyaaradaha
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » WestJet waxay Taageertaa Tallaalka Qasabka ah ee Shaqaalaha Diyaaradaha
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • Caafimaadka Warka • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Diyaaradda oo ka shaqaynaysa hirgelinta shuruudda tallaalka ee khasabka ah ee dawladda ee shaqaalaha duulimaadyada ee dawladda dhexe nidaamiso dhammaadka Oktoobar.
WestJet hadda waxay leedahay shaqaale firfircoon oo qiyaastii ah 6,000 WestJetters, halka 4000 ay yihiin kuwo aan firfircooneyn ama qosol leh.
Swoop hadda waxay leedahay shaqaale firfircoon oo gaaraya 340 shaqaale, halka in ka badan 170 ay weli yihiin kuwo aan firfircooneyn ama qosol leh.
Kooxda WestJet waxay u hoggaansami doontaa shuruudda ah in socotada gudaha ah si buuxda loo tallaalo ama loo baaro ka hor bixitaanka.
Kooxda WestJet ayaa maanta soo dhaweysay ku dhawaaqista Wasiirka Gaadiidka Cumar Alghabra oo ku saabsan tallaalka khasabka ah ee shaqaalaha duulimaadyada ee dowladda federaalka ah.
Wasiirka Gaadiidka Cumar Alghabra
"Waxaan sii wadnaa inaan si weyn iskaashi ugu yeelanno soo saarista tallaalka Kanada waxaanan si taxaddar leh uga shaqeyneynaa sidii aan u hirgelin lahayn siyaasadda dowladda ee tallaallada khasabka ah ee shaqaalaha diyaaradaha," ayuu yiri Mark Porter, WestJet Madaxweyne-ku-xigeenka Fulinta, Dadka iyo Dhaqanka. "Tallaalku waa habka ugu wax ku oolka badan ee loo sugo amniga martidayada iyo shaqaalahayaga, iyadoo la xakameynayo faafitaanka COVID-19."
“Waxaan fahansanahay in dadkeenu ay su’aalo yeelan doonaan oo ay la hadli doonaan shaqaalahayaga iyo kooxaha shaqaalaha waqtiga-dhabta ah,” ayuu sii raaciyay Mr. Porter. "Waxaan ka raadinaynaa dawladda federaalka faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan shuruudda waxaana naga go'an inaan ka wada shaqeyno sidii aan u xaqiijin lahayn hirgelinta siyaasadda dhammaadka Oktoobar."
WestJet hadda waxay leedahay shaqaale firfircoon oo qiyaastii ah 6,000 WestJetters, halka 4000 ay yihiin kuwo aan firfircooneyn ama qosol leh. Dheeri hadda waxay leedahay shaqaale firfircoon oo gaaraya 340 shaqaale, halka in ka badan 170 ay weli yihiin kuwo aan firfircooneyn ama qosol leh.
The Kooxda WestJet waxay u hoggaansami doontaa shuruudda loogu talagalay dadka socotada gudaha ah in si buuxda loo tallaalo ama loo baaro ka hor bixitaanka. Kooxda diyaaraddu waxay ku doodaysaa in baaritaanka degdegga ah ee antigen-ku uu yahay mid la aqbali karo, la heli karo oo la beddeli karo oo loogu talagalay socdaalayaasha aan la tallaalin.
Seychelles Tallaabooyinka Safarka Cusub ee COVID-19 Omicron awgeed
Saamaynta buuxda ee Brexit ee safarka caalamiga ah ma aha ...
Jarmalka ayaa dhigay rikoor cusub oo ah Gawaarida Korontada
Dadaalka soo kabashada Dalxiiska ayaa helay koror weyn ka dib soo noqoshada
Saliingooyinka Tallaalka COVID Hadda wuu hooseeyaa: Waxa laga yaabaa inay khatar geliyaan...
Digniinta Kansarka: Wadna xanuunka wuxuu noqon karaa khatar
IATA: 12-bilood oo ansax ah oo ah shahaadada EU-da ee COVID waxay...
Hogaamiyayaasha Safarada Caalamka Oo Ku Kalsoon Safar Buuxa...